Shungite mutema, anopenya, asiri crystalline mineraloid - vhidhiyo
Shungite ibwe rinoreva uye kristaro metaphysical kuporesa zvivakwa.
Tenga matombo echisikigo muchitoro chedu
Shungite yakasviba, inopenya, isiri-crystalline mineraloid inoumbwa neinopfuura 98 uremu muzana yekabhoni. Yakatanga kurondedzerwa kubva mubhangi padyo nemusha weShunga, muKarelia, Russia, kubva kwainowana zita rayo. Iro ibwe rakanzi rine maronda ezviyero (0.0001 <0.001%).
Shungite ibwe rinoreva
Izwi rekuti "shungite" rakatanga kushandiswa muna 1879 kutsanangura mineraloid ine zvinopfuura 98 muzana kabhoni. Munguva pfupi yapfuura izwi iri rakashandiswa zvakare kurondedzera shungite inotakura matombo, zvichikonzera kumwe kuvhiringidzika. Iro ibwe rakave rakarongedzwa zvakaringana pane yavo kabhoni zvemukati, ine shungite-1 iine kabhoni yezvinhu mune yakasarudzika 98-100 huremu muzana uye shungite-2, -3, -4 uye -5 ine zvirimo mumatanho 35-80 muzana , 20-35 muzana, 10-20 muzana uye pasi pegumi muzana, zvichiteerana. Mune kumwe kusarudzika, Dombo rakakamurwa kuva rakajeka, rakajeka, rakajeka uye rakapfava pahunza hwekujeka kwavo.
Iyo kristaro ine maviri akakosha modhi ezviitiko, akaparadzirwa mukati medhi dombo uye sezviri pachena kunge akaunganidza zvinhu. Yakatamisirwa shungite, inova mabwe anopenya, yakadudzirwa kuti inomiririra mafrocrocarbon akafambiswa uye anowanikwa seyakaganhurirwa, matanda kana lenzi pedyo nekuenderana neyakagadzwa dombo kuisa, kana tsinga, iyo inowanikwa seyakatsemuka-mitsipa. zvinogona zvakare kuitika semakondohwe mukati mediki sedimentary matombo.
Iyo dombo rinokosha kusvika parinhasi zvakanyanya kuwanikwa muRussia. Iyo huru dhipoziti iri munzvimbo yeLake Onega yeKarelia, kuZazhoginskoye, padhuze naShunga, nechimwe chiitiko kuVozhmozero. Zvimwe zviitiko zviviri zvidiki zvakataurwa muRussia, imwe muKamchatka mumatombo anoputika uye imwe yacho yakaumbwa nekupiswa kwezvakapambwa kubva kumugodhi wemarasha pakudziya kwakanyanya muChelyabinsk. Zvimwe zviitiko zvakatsanangurwa kubva kuAustria, India, Democratic Republic yeCongo neKazakhstan.
Iro dombo rave kutorwa semuenzaniso weabiogenic petroleum kuumbwa, asi kwayakaberekerwa kwayakatosimbiswa. Asina-kutama matombo anowanikwa akananga stratigraphically pamusoro pemadhipoiti akaumbwa munzvimbo isina kudzika yemvura carbonate shefu kune isiri-yegungwa evaporitic nharaunda. Iyo shungite inobata nhevedzano inofungidzirwa kuti yakaiswa panguva yekumhanyisa mhirizhonga, inoenderana ne alkaline volcanic matombo anowanikwa mukati mekuteedzana. Iyo organic-akapfuma sediment anogona kunge akaiswa mune ine brackish lagoonal marongero. Iko kusunganidzwa kwekabhoni kunoratidza kukwidziridzwa kwehukama hwehuwandu hwehuwandu, pamwe nekuda kwenzvimbo dzakakwira dzezvakakwana zvinowanikwa kubva kune zvakapindirana zvemakomo.
Iyo yakasungirirwa shungite-inotakura mari inochengetedza sedimentary zvimiro zvinoshandurwa seyakagadziriswa metamorphosed mafuta sosi matombo. Zvimwe zvivakwa zvakaita sehowa zvakaita semhowa zvakave zvichionekwa, izvo zvinodudzirwa sezvinobvira makomo anoputika. Mhando uye mutsinga dzakasiyana, uye ichizadza zvipuka uye ichigadzira matrix kune breccias, anodudzirwa seakatamiswa peturu, ikozvino iri sebitamen yemetamorphosed.
Iyo yedombo dhipoziti ine inofungidzirwa yakazara kabhoni yakachengetwa inopfuura mazana maviri negigatonnes. Inowanikwa mukati mekuteedzana kwePalaeoproterozoic metasedimentary uye metavolcanic matombo anochengetwa mukuenderana. Iwo akateedzana akanyorwa neyakafirwa gabbro, iyo inopa zuva ra250 ± 1980 Ma, uye iri pasi pema dolomites, ayo anopa zera re27 ± 2090 Ma. Iko kune mapfumbamwe shungite-anotakura akaturikidzana mukati meZaonezhskaya Fomu, kubva pakati peakachengetedzwa akateedzana. Pakati peizvi mukobvu wakapetwa nhanhatu, unozivikanwawo se "Kubudirira kumusoro", nekuda kweyakaunganidzwa matombo. Zvikwereti zvina zvikuru zvinozivikanwa kubva munzvimbo iyi, iyo Shungskoe, Maksovo, Zazhogino uye Nigozero deposits. Iyo Shungskoe dhipoziti ndiyo inonyanya kudzidza uye inonyanya kucherwa kunze.
Iro dombo rave richishandiswa senzira yekurapa yekurapa kubva pakutanga kwezana ramakore gumi nemasere. Peter the Great akaisa yekutanga spa yeRussia muKarelia kuti ishandise iyo yekuchenesa mvura yehunhu, iyo yaakazvionera. Akasimudzirawo mashandisiro ayo mukupa yakanatswa mvura yeuto reRussia. Iyo anti-bhakitiriya zvimiro zvekristaro zvakasimbiswa nekuyedzwa kwemazuva ano.
Yakave ichishandiswa kubvira pakati pezana ramakore rechi 18 se pigment yependi, uye parizvino iri kutengeswa pasi pemazita "kabhoni nhema" kana "shungite yakasviba nhema".
Muma1970s, Yakashandiswa mukugadzirwa kwechinhu chinoputira, chinozivikanwa shungisite. Shungisite inogadzirirwa nekudziya matombo ane yakadzika kuwanda kusvika 1090-1130 ° C uye inoshandiswa seyepasi density filler.
Shungite ibwe rinoreva uye kristaro metaphysical kuporesa zvivakwa zvinobatsira
Aya matombo anotendwa kuti ane hunhu hunogona kusimudzira hutano hwepfungwa dzako, muviri, uye mweya nenzira dzakasiyana.
Shungite ibwe rinoreva uye kristaro metaphysical kuporesa zvivakwa ibwe rakanakisa rekusimbisa. Kudengenyeka kwaro kwepamusoro kunobatsira kuunza muviri wako wemweya zvivakwa mupasi memuviri kuitira kuti ugone kubatanidza uchenjeri hwepasi uye zvidzidzo zvekarmic. ibwe rinoshambidza rine simba uye rinodzinga zvinhu kubva muhupenyu hwako izvo zvinogona kunge zvichikusha simba rako.
Kubva panguva dzekare, dombo raishandiswa kunatsa mvura. Izvi zvinokonzerwa nebasa rayo raanorwisa mabhakitiriya nemavirusi.
Chidzidzo che2018 chinoti rough shungite inogona kusefa mvura nekubvisa zvinosvibisa uye zvinhu zvehupenyu semishonga yezvipembenene. Chidzidzo che2017 chakawana zvakare kuti kabhoni kubva kushungite inogona kubvisa zvinokonzerwa nemwaranzi kubva mumvura.
Kana iwe uchinetseka nekushushikana, kushushikana, kana kunzwa kunetseka, edza kupfeka chidimbu cheshungite jewelry. Chero nguva iwe yaunonzwa kuremerwa, isa pfungwa dzako kunzvimbo iyo ibwe iri kusangana nemuviri wako wenyama, vhara maziso ako, uye tarisa pakufema kwako. Femera mukati kuverenga mana, bata chiverengo chechina, wobva waburitsa mweya uchiverenga ina. Uku kufema kwakadzika, zvine mutsindo kunodzosera iwe kunzvimbo yako uye kunobatsira kugadzira runyararo mupfungwa dzako.
Shungite ine kuporesa zvinhu here?
Shungite ibwe rinoreva uye kristaro metaphysical kurapa zvimiro zvekunatsa kwepanyama uye detoxification, ayo ekurapa zvimiro anoenda zvakadzama munzvimbo dzemweya uye dzemweya, zvichibvumira chero munhu anoshanda neshungite kuchenesa yavo simba remasimba anokuvadza kana asingadiwe simba.
Ndekupi kwandinofanira kuisa shungite mumba mangu?
Isa dombo padyo nemubhedha wako kana pasi pepiro yako. Saizvozvowo, iwe unogona kuisa piramidhi padhuze neyakaona kana microwave. Namatira ndiro ye vrystal pabutiro rekumashure kwefoni yako. Iwe unogona zvakare kupfeka chigero muchimiro chemakendani uye mazango.
Zvakachengeteka here kupfeka shungite?
Kupfeka shungite hakuzoite chete kuti chakra kupora ive nesimba, asi zvakare ichagadzirisa simba kuburitswa kubva kune yakavharirwa kana yakanyanyisa chakra. Kusatora simba simba kunokutendera iwe kudzidzira chakra kupora uye kudzoreredza muyero kumudzi.
Iwe unogona sei kuziva kana shungite iri yechokwadi?
Rakajeka dema dema ndicho chiratidzo chekutanga chinosiyanisa cheibwe chairo. Kazhinji ine infusions ye brown, grey kana yegoridhe mavara. Aya ndiwo matanho emamwe zvicherwa senge pyrite, ayo anowanikwa mune imwecheteyo dura.
Unosuka sei ako makristasi?
Nyudza kristaro yako mubhavhu remvura husiku, kana kuibata pasi pemvura inotonhorera kwemaminetsi mashoma. Mvura yemunyu ichachenesawo makristasi. Shandisa mvura yegungwa kana musanganiswa wakagadzirwa kubva pamashupuni 1-2 emunyu akanyungudika zvachose muma 8 ounces emvura. Shenesa kristal yako mumvura yakajeka kana wapedza.
Tenga matombo anokosha muchitoro chedu
Isu tinogadzira tsika shungite yekristaro yematombo echishongo yekutengesa semabatanidzwa maringi, mitsipa, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Ndiri kuda kugashira zvigadziriso nezve zvigadzirwa uye kukwidziridzwa.